Ahoana no ahafahan'ny orinasan-dalànao mahazo tombony amin'ny mpamorona rindrankajy automatique?
Ny fampiroboroboana lamin'asa goavana dia ampahany manan-danja amin'ny fampielezan-kevitra fanentanana fikarohana. Na izany aza, raha indray mandeha farafaharatsiny indray mandeha ny fanatsarana ny tranokalam-pifanarahana, dia tokony ho fantatrao fa ny fananganana backlinks izay miditra sy miezaka manangana ny toerana misy anao, dia sarotra sy sarotra. Ny fanavaozana Google farany dia nahatonga ity zava-dehibe ity hanamarinana ny kalitaon'ny loharanon-tranonkala izay mampifandray anao sy ny maha-zava-dehibe ny rohy ivelany.
Ity lahatsoratra ity dia horesahantsika bebe kokoa hoe ahoana no ahafahan'ny orinasan'ny lalànanareo mamorona lamosina avo lenta izay mitondra vokatra azo tsoahina amin'ny orinasan-tserasera, na dia tsy ampiasaina amin'ny endri-tsoratry ny backlink aza.
Mametraka backlinks ho an'ny vohikala lalàna
Ny rohy ivelany avy any ivelany dia manondro ny tranonkalanao, ny Google azo itokisana kokoa dia midika izany tranonkala izany, ary avy eo, ny laharana ambony manome azy io.
Ny tranonkala rehetra izay manana ny lanjany ho an'ny mpiserasera dia matetika mifandraika amin'ny harena sy ny mpampiasa maro ary avy eo mametraha avo ny SERP. Raha loharanom-baovao toy ny Wikipedia, Forbes na CNN no hita ao amin'ny vokatra dimy voalohany amin'ny fangatahanao, dia tsy mila mandany fotoana betsaka mitady ny vaovao ilaina. Amin'ny fametrahana tranonkala avo lenta sy manerantany ao amin'ny toerana TOP, Google dia manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny rafitry ny fikarohana.
Ny fomba nentim-paharazana hahazoana jirikin'ny fifandraisana dia amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny votoatin'ny fampahafantarana sy ny kalitaony ary miandry azy io hiparitaka ao amin'ny tranonkala. Na izany aza dia tsy afaka miandry ireo mpizaka tranonkala sasany mandra-pifandraisana rohy ara-boajanahary ary manondro ireo mpamorona rindrambaiko hafa.
Ahoana no fiasan'ny mpamorona mpanamboatra bakalorea?
Ireo mpamorona mpamorona backlink dia mamorona rindlk amin'ny haingam-pandeha ary mampanantena fa ireo rohy ireo dia avy amin'ny loharano avo lenta. Na izany aza, araka ny nambarako talohan'ny fahazoana kalitaon'ny rohy ivelany dia mila fotoana sy ezaka. Izany no mahatonga ny soso-kevitr'izy ireo ho toa tsara loatra ka ho marina. Amin'ny ankapobeny, ny mpamorona ny backlink dia miasa amin'ny alàlan'ny fananana tahirin-kevitra be dia be avy amin'ny tranonkala izay mora alefa. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo fotodrafitr'asa ireo dia novidina tamin'ny mpamorona backlink vao haingana. Ankoatra izany, ny bots amin'ny rindrambaiko fanorenana rohy dia mamorona fanehoan-kevitra manandanja amin'ny blaogy sy ny forum ary koa ny famoahana lahatsoratra amin'ny tranonkala maro samihafa. Raha ny lalàna dia mametraka ny lahatsoratrao amin'ny lahatsoratry ny backlink ho an'ny tranonkala maro izay tsy mitaky fanekena.
Ny tombontsoa voalohany izay napetraka amin'ny mpamorona an-drakitra dia ny fampidirana loharanom-baovao iray vaovao amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny teny voafaritra mazava ao anatin'ny fotoana fohy.
Inona ny olana mety hitranga amin'ny fampiasana mpamorona havaozina?
Amin'ny fampiharana, ny taranaka mifandraika amin'ny otrik'aretina dia tsy mitovy amin'ny fomba amam-panao amin'ny rohim-pifandraisana ary mihevitra ny ahiahiny ho an'ny karoka fitadiavana.
Raha toa ka manapa-kevitra ny hampiasa ny mpamorona backlinks ny tompon'ny orinasa iray lalàna, dia mety handoa ny lazany. Satria fitaovana maoderina toy izany no mamokatra votoaty tsy dia tsara loatra ho fampiroboroboana tranonkala iray ary hahazo rindran-damina maro kokoa, ny mpampiasa dia hampifandray ireo votoaty amin'ny fako miaraka amin'ny orinasan'ny orinasanao.
Ny olana iray hafa mety hiatrehanao ny fampiasana mpamorona rindrambaiko maoderina dia ny sazy Google izay lasa henjana bebe kokoa aorian'ny fampivoarana farany an'i Penguin. Ireo sazy ireo dia mety handrava ny ezaka rehetra ataonao amin'ny SEO ary hampiato ny loharanom-baovao Source .